मागेर कति पढ्ने पुस्तक ?	सन्दर्भ उही हो पेशागत घुमफिर अनि दिनहँु जुरेका कार्यक्रमहरुको चटारो । दिनभर बटुलेका समाचारका पोका साँझ आधुनिक यन्त्रमा शब्द मार्फत खन्याउँछु अनि दृश्य यन्त्रमा खिचिएका तस्वीर एकपटक सरसर्ती हेर्छु । रेकर्डरमा भएका सम्बाद र भाषण सुन्छु पनि । चाहिने जति राख्छु समाचार बनेका समाचार छाप्ने मिडियामा प्रेषित गर्छु । यो तयारीसँगै नचाहिएका फ्याँक्छु । यो सिलसिला जारी छ । यही क्रमसँगै पुस्तकालयको सानो ईच्छा मनमा थियो । पुस्तकका दुई भारीलाई कसैलै पढेर केही सिके हुन्थ्यो भन्ने आकाक्षां पनि थियो ।
This entry was posted on अप्रील 19, 2010 at 4:22 बिहान and is filed under म र मेरो कुरा, मेरो लेख. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	ट्यागहरु: पढ्ने, पुस्तक, मागेर	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.